Ninkeeda ayay xambaartay Qisada jacaylka lamaanaha dhabta ah | Guurdoon Free Online social media web
Ninkeeda ayay xambaartay Qisada jacaylka lamaanaha dhabta ah
Haweenay u dhalatay Dalka Masar magaceeduna yahay Hiba Al-sayid Rajab ay dhabarka ku soo qaaday saygeeda ama ninkeeda oo xanuunsan iyadoo geysay Cisbitaalka.
Marwo Hiba ayaa waxay haysaa saygeeda oo aanay da’diisu aad u weynayn, balse qaba cuduro dhawr ah, sidoo kalena waxaan si fiican u shaqayn kelyihiisa waxaanay toddobaadkii saddex jeer geysaa cisbitaalka si loo soo meyro ama loogu dhaqo kelyaha.
Haddaba shabakada Al-arabia ayaa wareysi ay la yeelatay haweenaydan waxay ku sheegtay in ninkeedu uu taksiile ahaan jiray, laakiin xanuunka hayaa uu ku dhacay Sannadkii 2012-kii xilligaasi kadibna waxay sheegtay inay shaqo bilawday oo ay iyadu dabarto masaariifta reerkeeda iyo saygeeda bukaanka ah.
Hiba ayaa waxay sheegtay in saygeedu isagoo ka murageysan xaalada caafimaad daro ee haysa iyo daruufaha adag ee la soo gudboonaaday uu usoo bandhigay in ay warqadeeda ka qaadato oo ay kala tagaan, laakiin ay hibo diiday in sidaasi yeesho, waxa aanay sheegtay inay ku qanacsantahay xaaladda nololeed ee ay ku jirto wax kasta oo dunidan ka dhacaana ay gacanta ILLAAHAY SUBXAANA WATACAALAA Ku jiraan.
Dhacdadan waxaa laga baran karaa in qadarinta iyo isku damqashada ka dhexaysa lammaanaha nolosha waddaaga ay tusaale u noqon karaan garab istaaga ay is garab istaagaan marka midkood ay dhibaato soo waajahdo.
Bil gudaheeda ayaad ku cayilaysaa cuntadan haddaad cunto
Salman Khan oo la kulmay wasiirka canadiyaanka asalkiisa soomaaliga ah
MD Farmaajo iyo shacabka soomaaliyeed
Dhalinyarada Heggo sawiro 2018
Updated: April 12, 2018 — 5:58 am